ကျုံးပတ်လည်မှ မဏ္ဍပ်များကို လုံခြုံရေး ကင်မရာများ တပ်ဆင်ရန် ညွှန်ကြားထား၊ ပွဲတော်လာသူများ လက?? - Yangon Media Group
ကျုံးပတ်လည်မှ မဏ္ဍပ်များကို လုံခြုံရေး ကင်မရာများ တပ်ဆင်ရန် ညွှန်ကြားထား၊ ပွဲတော်လာသူများ လက??
မန္တလေးကျုံး ပတ်လည်တွင် တည်ဆောက်ခွင့်ရရှိထားသော ရေကစားမဏ္ဍပ်များနှင့် ဖျော်ဖြေရေးမဏ္ဍပ်များ၌ လုံခြုံ ရေးကင်မရာများ အလုံအလောက် တပ်ဆင်ထားမှသာ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကျုံးတောင်ဘက် လမ်းလျှောက်သင်္ကြန်နှင့် ကျုံးအ ရှေ့ဘက် တောသင်္ကြန်ညဈေးတို့ လာရောက်လည်ပတ်ကြမည့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပခရီးသွားများ လုံခြုံ ရေးအတွက် အထူးဂရုစိုက်စောင့် ကြည့်သွားရန် စီစဉ်ထားကြောင်း မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီမှ သိရသည်။
”မနှစ်တုန်းကတော့ လမ်း လျှောက်သင်္ကြန်အတွက် စုစုပေါင်း လုံခြုံရေးကင်မရာ အလုံးရေ ၁၂ဝ ကျော်အထိ တပ်ဆင်ခဲ့သလို ဒီနှစ်မှာလည်း ပထမဦးဆုံးစတင်ကျင်းပမယ့် တောသင်္ကြန်ညဈေးအတွက်ပါ ကင်မရာတွေကို လုံလုံလောက် လောက်တပ်ဆင်သွားမှာပါ။ အဲဒီကင်မရာတွေကနေ ရိုက်ကူးထားတဲ့ မှတ်တမ်းတွေကို ကော်မတီရုံးအတွင်းမှာရှိတဲ့ ထိန်းချုပ်ခန်းကနေ တိုက်ရိုက်စောင့်ကြည့်နေမှာဖြစ်ပြီး လူပုံသဏ္ဌာန်ထင်ရှားအောင်အထိ အသေးစိတ်ဆွဲယူမှတ်တမ်းတင်နိုင် အောင် လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့လှည့်ခရီးသည်တွေကလည်း မန္တလေးသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို စိတ်ဝင်တစားလာရောက် ဆင် နွှဲကြဖို့အတွက် ပြည်တွင်းခရီးသွား ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားပြီး ဖြစ်လို့ လုံခြုံရေးကို အထူးဂရုစိုက် ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကနေ ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ အဝင်မုခ်ဦးတွေမှာဆိုရင် ဝင်ရောက်တော့မယ်သူတွေ လက်နက်ကိုင်ဆောင်လာခြင်း ရှိ၊ မရှိကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ရှာဖွေစစ် ဆေးသွားမှာဖြစ်သလို မိုင်းရှာကိရိယာတွေပါထားရှိထားမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဝင် တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးကျော်ဇော အောင်က မတ် ၂၂ ရက်တွင် ဒီမိုက ရေစီတူဒေးသို့ ပြောကြားသည်။
ရေကစားမဏ္ဍပ်နှင့်ဖျော်ဖြေ ရေးမဏ္ဍပ်တိုင်းတွင် မဏ္ဍပ်တစ်ခု လျင်လုံခြုံရေးကင်မရာ အနည်းဆုံး ၁၆ လုံးတပ်ဆင်ရန် ညွှန်ကြားထား၍ ကင်မရာများမှ သင်္ကြန်ရက်များအတွင်း ရိုက်ကူးထားသည့် နေ့စဉ် မှတ်တမ်းများကို စနစ်တကျသိမ်းဆည်းထားရမည်ဖြစ်ပြီး ကျုံးပတ်လည်တွင် ကွပ်ကဲရေးရုံးခန်းများဖွင့် လှစ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း၍ မဏ္ဍပ်များကို တစ်နေ့အနည်းဆုံးသုံးကြိမ် မိုင်းရှာဖွေရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်သင်္ကြန်အတွက် ကျုံးပတ်လည်တွင် စုစုပေါင်းမဏ္ဍပ် ၂၆ ခုကိုချထားပေးရန် နေရာသတ်မှတ်ထားပြီး သတ်မှတ်စည်း ကမ်းချက်များအတိုင်း တည် ဆောက်သွားရန်နှင့် ခိုင်ခံ့မှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးမှုခံယူရန် ညွှန်ကြားထား ကြောင်း မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီမှသိရသည်။